Madaxweyne Ku Xigeenka iyo Guddomiyaha Barlamanka Hirshabelle Oo Dib Ugu Laabtay Magalada Jowhar -
HomeWararkaMadaxweyne Ku Xigeenka iyo Guddomiyaha Barlamanka Hirshabelle Oo Dib Ugu Laabtay Magalada Jowhar
Madaxweyne Ku Xigeenka iyo Guddomiyaha Barlamanka Hirshabelle Oo Dib Ugu Laabtay Magalada Jowhar
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen iyo guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar kadib markii ay toddobaadyadii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka iyo guddoomiye baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin ay horkacayeen Guddoomiye ku xigeenka 1aad Baarlamaanka hirshabele Cabdi Xuseen Geedi iyo guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka Hirshabelle Marwo Canab Axmed Ciise,wasiiro,xildhibaano,madaxda gobolka Sh/dhexe iyo dadweyne faro badan.
Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Barre ayaa waxa ay ku sheegeen in howlo shaqo ay ugu maqnaayeen magaalada Muqdisho ayna la soo kulmeen madaxda dowlada Federalka.
“Waxaan la kulanay madaxda ugu sareysa dowlada federalka waxaana aan ka wadahadalnay sidii amniga Hirshabelle wax looga qaban lahaa meel wanaagsan ayaana isla soo dhignay waxaana dhowaan bilaaban doona howlgalo lagu xaqiijinayo amniga Hirshabelle.”ayuu yiri Madaxweyne Ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen.
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlawe Xuseen ayaa waxa uu amar ku bixiyay in ciidamada booliska ay gacanta ku soo dhigaan isla markaana sharciga horkeenaan dadkii ka dambeeyay fal kufsi ah oo loogu geystey mid kamid ah xeryaha barakacayaasha magaalada Jowhar haweeney 85 sano jir ah.
“Waxaan u ballanqaadayaa abaalmarin wanaagsan ciddii gacan ka geysata sidii loo soo heli lahaa dadkii ka dambeeyay falka kufsiga ah oo aan hore loogaga baran gobolka Sh/dhexe.”ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo ka hadlay shirka jaraa’id ayaa sheegay in kalfadhiga baarlamaanka Hirshabelle uu furmi doono ayna ka soo qeybgali doonaan madax sare waxana uu xusay in Baarlamaanka uu u soo dhamaaday fasax ay ku jireen.
Magaalada Jowhar ayaa waxaa maanta sidoo kale soo gaaray xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle kuwaasoo bilooyinkii la soo dhaafay fasax ugaga maqnaa caasimada Hirshabelle.